We She Me: Yes or No မပြောချင်တဲ့ အခါ
Anonymous - 1/12/11, 9:05 PM
A useful post for me!
I always give wrong responses for such Yes/No questions. Thanks!
မောင်မျိုး - 1/12/11, 9:23 PM
လေ့လာ မှတ်သားသွားပါတယ် ။ ဒီမှာက Yes or No ဖြေစရာမလိုပေမယ့် ဘာသာစကားတိုင်းမှာလည်း စကားကို တုံးတိပြောတာထပ် နည်းနည်းလှအောင် သုံးတဲ့အသုံးကို ပိုကောင်းတာပေါ့ ။ဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး ကျနော်လည်း အင်္ဂလိပ်စာ နည်းနည်းပြန်ဖတ်အုံးမှလို့ အတွေးဝင်သွားတယ် Yes or No လောက်ပဲ လွယ်လွယ်ပြောမိနေလို့း)
Andy Myint - 1/12/11, 9:29 PM
No worries, Reader.
ဒီလောက်ကတော့ ဗီဒီယို များများ ကြည့်ရင် ရတယ် မောင်မျိုး
ko9- 1/12/11, 9:39 PM
WWKM - 1/12/11, 9:42 PM
မတွေ့တာကြာပြီ .စာလာဖတ်သွားပါတယ် ကိုအန်ဒီရေ။
Sunny - 1/12/11, 10:03 PM
အင်္ဂလိပ်လိုတင်မက မြန်မာလိုပါ yes or no မေးခွန်းတွေနဲ့ အမြဲမှားလေ့ ရှိတဲ့သူမို့ ဒီပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါပဲ..
rose - 1/12/11, 11:09 PM
ကိုအန်ဒီ... တန်ဖိုးရှိလှတဲ့ ပို့စ်လေး လာဖတ်သွားပါတယ်။ ကျေးဇူး။
Anonymous - 1/13/11, 1:54 AM
ခုလို အသုံးဝင်တာလေးတွေ ဝေမျှပေးတာ ကျေးဇူးပါ။ ဒါနဲ့ Are you finished? ဆိုတာ Grammar မှန်လားပာင်။ မှားတယ်လို့ ထင်နေလို့။ သိပ်မသေချာလို့ မေးတာပါ။
TZA - 1/13/11, 3:14 AM
လာဖတ်သွားတယ်ကိုအန်ဒီ.. ကျနော့်ဆီမှာလည်း လာမန့်သွားတဲ့ ALVARO လည်း ကျနော့်နဲ့ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် လာဖတ်သွားပုံရတယ် (ဟဲဟဲ)
P.Ti - 1/13/11, 9:19 AM
Yes, No မဖြေတတ်လို့ တိုင်းတပါးမှာ မြန်မာတစ်ယောက်ထောင်ကျဖူးတယ် ဆိုတဲ့ ဟာသကိုကြားဖူးတော့ အဲဒါကိုတော့ ဂရုစိုက်ပြီး ပြန်ဖြေတယ်... ဒါပေမယ့် တခါတလေ မှားတုန်းပါပဲ... :D
မြန်မာလို Yes No မပါပဲ ဟိုမရောက် ဒီမရောက်ဖြေလို့ရသေးတယ် "ရပါတယ်"
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) - 1/13/11, 9:50 AM
သတိမထားမိတာရော အမှတ်တမဲ့ရော မှားနေတာလေးတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ပြန်ပြင်ရပါဦးမယ် ..
ကိုမျိုး (အညာမြေ) - 1/13/11, 10:37 AM
တကယ့်ကို မှတ်သားစရာလေးတွေ ပါပဲ။ ကျေးဇူးပါဗျာ...
Andy Myint - 1/13/11, 1:05 PM
ယူနီကုတ် ပြောင်းရင် မဖတ်ကြတော့ဘူးဆိုလို့ မပြောင်းခင် အမြန်ရေးနေတာ Ko9(နောက်တာ။ အားတုန်းခဏ ရေးဖြစ်တာပါ။)
မြန်မာပြည်ပြန်ရောက်တော့ ပိုတောင် အလုပ်တွေ ရှုပ်နေတာ ဖတ်ဖြစ်တယ် မ၀ါဝါ။ တကူးတက Comment လာပေးတဲ့ အတွက် Thank you။
အမှတ်တမဲ့ဆို ဒီလိုပဲ မှားတတ်ကြပါတယ် Sunny
“Are you finished?” က သုံးတော့ သုံးကြတယ်။ “Have you ..” လောက် မကောင်းတဲ့ အပြင် သူ့ထက် တိုက်တွန်းတဲ့ သဘောပိုပါတယ် စာဖတ်သူ။
ဒီလူ့နှယ် ဗမာ ဘလော့တွေကို ပတ်ချာလှည် ကြော်ငြာနေတယ်နဲ့ တူတယ် ကိုTZA
ရပါတယ် ကိုပီတိရယ်.. ဟမ် ဘာဆိုလိုပါလိမ့်
ဟီးဟီး… သုံးလို့ ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆက်သုံးသွားတယ်။
zue - 1/13/11, 1:29 PM
Andy Myint - 1/13/11, 3:27 PM
"Of course not" အဖြေနဲ့ "Are you sure?" အမေးကို ဖြေပုံ ထပ်ဖြည့်ထားပါတယ်။
zn - 1/13/11, 5:43 PM
really useful usage!
သိင်္ဂါကျော် - 1/13/11, 6:29 PM
yes , no ကို အလွယ်သုံးမိနေတာ.. တစ်ခါတလေလည်း အဲလိုမျိုးတွေ မှားခဲ့မယ် ထင်ပါရဲ့.. ဒါလေးဖတ်ပြီး သတိထားတော့မယ်..
ShwunMi-ရွှန်းမီ-ရှနျးမီ - 1/14/11, 1:27 AM
ရယ်ရတယ်.. မုန့်ဆိုင်မှာ 'would you mind if I take the chair?' လို့ လာမေးပြီး 'no, I won't..' လို့ အလွယ်ဖြေလိုက်တော့ လှည့်ထွက်သွားတာ ဖြစ်ဖူးတယ်..
အဲ့ဒါနဲ့ နောက်တော့ 'you can take it' လို့ပဲ ရှည်ရှည်လျားလျား ပြန်ဖြေနေရတယ်..
သူ့ဘာသာ မေးချင်ရာမေးပြီး ခေါင်းခါရင်ငြင်းတာပဲလို့ ထင်တဲ့လူများသား :)
Anonymous - 1/14/11, 6:03 AM
Aung - 1/14/11, 10:46 PM
ကျနော်တောင် ကျနော့် ဘလော့မှာ သူငယ်ချင်းတွေ သိအောင်ရေးမလို့ လုပ်နေသေးတယ်၊ မြန်မာလူမျိုး အများစုက မြန်မာလို တိုက်ရိုက်ပြန်ပြီး Yes, I don't... ဆိုတာမျိုးကို မှားသုံးတာတွေ တွေ့ရလို့လေ။ တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်စာမှာ negative နဲ့ positive ကို ပေါင်းလေ့မရှိဖူးမဟုတ်လား။ အင်းဟုတ်ပ ဆိုတဲ့ ထောက်ခံတဲ့ စကားလုံးမျိုးကတော့ စကားပြောရင်တော့ ကျနော်က indeed လို့သိပ်မသုံးဖူး။ သတင်းပြောတဲ့ လူနဲ့တူလို့ ဟီး.... exactly လို့ သုံးတာများပါတယ်။ စီးပွားရေး သမားတွေနဲ့ စကားပြောရင်တော့ နည်းနည်း သတိထားပြီး precisely လို့ သုံးပါတယ်။ သူတို့က သိတဲ့ အတိုင်းလေ အတိအကျ သိပ်ယူဆကြတာ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျနော့် ဘလော့မှာ နောက် အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီကို Link ပေးပြီး ညွှန်းပါဦးမယ်။ သြစတေးလျက ထမင်းစား ရေသောက် အသုံးအနှုံးလေးတွေကို ဖတ်ချင်ကြသူတွေ အတွက် အသုံးဝင်မှာပါ။
Anonymous - 1/15/11, 2:54 AM
Glad to read that u r writting back.Nice post.Happy 2011.Maybnot2late(^_^)....gyidaw
JohnMoeEain - 1/18/11, 3:15 AM
Yes or No ဆိုတာလည်း သိပ်မလွယ်ကြောင်း၊ သိပ်လည်း မခက်ကြောင်း ပိုသိသွားတယ်
Thanksalot ပါး)